Qurxinta Shukulaatada fudud iyo hal-abuurka leh - Video Bilaash Ah
Qurxinta Shukulaatada fudud
Sida loogu sameeyo 6 qurxin oo fudud qurxinta shukulaatada ee keegaaga ama macmacaankaaga
Waan jeclahay sameynta qurxinta shukulaatada! Kaliya maahan inay ku raaxeystaan ​​sameynta laakiin waa kuwo dhadhan fiican leh! Qurxinta shukulaatada ayaa sida ugu fiican u shaqeysa haddii aad isticmaasho shukulaatada la qaboojiyey laakiin haddii aadan rabin inaad xanaaqdo shukulaatada waxaad u isticmaali kartaa buskudka shukulaatada mashaariicda badankood. Haddii aad dooneysay inaad tijaabiso gacantaada qaar ka mid ah qurxinta shukulaatada xiisaha leh ee keegaaga ama macmacaankaaga, waxaad u baahan doontaa inaad iska hubiso kuwan!
* boostada waxaa ku jira xiriiriyeyaal xiriir la leh taas oo macnaheedu yahay in la i siinayo xoogaa dinaar ah haddii aad wax ka iibsato xiriiriyahayga laakiin wax qiimo ah kugu fadhiisan maayo *
Shukulaatada ugufiican qurxinta shukulaatada
Qurxinta shukulaatada, waan adeegsan doonnaa shukulaatada kulul at 86ºF taas oo ah heer kulka shaqada ee ugu wanaagsan. Waxaan isticmaalaa a heerkulbeeg shukulaato ah iyo a baaquli isku qasan ku ku xanaaq shukulaatadayda microwave-ka . Si dhakhso leh oo fudud mashruucyadan yaryar!
Haddii aadan rabin inaad xanaaqdo shukulaatada, waad isticmaali kartaa shukulaatada isku dhafan . Waxaan jeclahay astaanta Guittard. Haddii aad rabto inaad midab dhigto nacnacaada dhalaalaya, waa inaad isticmaashaa midabaynta cuntada shukulaatada ama waxaad isticmaali kartaa nacnac nacnac midab leh sida nooca Wilton. Uma isticmaali kartid midabaynta cuntada caadiga ah midabka shukulaatada.
Waa maxay farqiga u dhexeeya shukulaatada dhabta ah iyo shukulaatada isku dhafan?
Shukulaatada dhabta ah waxay kujirtaa subag koko ah waxayna ubaahantahay in la xakameeyo kahor intaadan u isticmaalin qaab-dhismeedka ama qurxinta. Haddii aadan xanaaqin shukulaatada, waxay noqon doontaa jilicsan, caajis ah oo luminaysa qaabkeeda si fudud. Shukulaatada dhabta ahi waxay dhalaashaa heerkulka jidhka waxayna leedahay dhadhan aad u fiican oo si dhakhso leh u qabta markaad wax qaniinto.
Shukulaatada isku dhafan (sida nacnaca Wilton oo dhalaalaya) mararka qaarkood loo yaqaan shukulaatada dahaadhka ah, kuma dhex jiro subagga kookaha. Waxay yeelan kartaa badel kale oo dufan ah oo aan u baahnayn xanaaq. Waxay leedahay barta dhalaalida ee aadka uga saraysa, ka qaalisan kuna xasilloon jawiga diiran. Khasaaraha ayaa ah inuusan u dhadhamin sida shukulaatada dhabta ah.
1. Sida Loo Sameeyo Qurxinta Meelaha Shukulaatada
Keegyo leh dhinacyo shukulaato ah ayaa meel walba taagan hadda. Laga soo bilaabo swirls midab leh oo u eg meerayaasha illaa bir dhalaalaya atop naqshadaha casriga ah. Sameynta aaladda shukulaatada waxay noqon kartaa mid aad u sarreeya.
Si aad u sameysid qaybaha shukulaatada waxaad u baahan doontaa xoogaa shukulaato dabacsan iyo caaryada aaladda polycarbonate. Haddii aadan rabin inaad ku dhibto shukulaatada dabeecad xumada leh waxaad isticmaali kartaa canjeero dhalaalaya iyo caaryada meeraha silikooniga ah. Dufcadaha dhalaalaya kama sii daayaan caaryada polycarbonate. Sababta aan u jeclahay isticmaalka caaryada 'polycarbonate' waa sababta oo ah dhinacyada oo aad u dhalaalaya.
Shukulaatadaada ku shub shukulaatadaada acrylic-ka 86ºF kuna xoq shukulaatada xad-dhaafka ah xaashida kursiga keydka
Taabo dhinaca caaryada si aad uga saarto wax goobooyin hawo ah.
30 ilbidhiqsi kadib shukulaatada ka soo baxa wasakhahaasi, ku garaac xoqitaanka kursigaaga si qolofku u khafiifiyaan.
Dhig caaryada dusha warqad xaashi ah illaa 10-15 daqiiqo ilaa shukulaatada aysan dareere ahayn laakiin aan si buuxda loo dhigin.
Ka xoq shukulaatada xad dhaafka ah si aad nadiif nadiif ah uga sameyso dhinacyada.
Shukulaatooyinka dhig qaboojiyaha 10 daqiiqo ama ilaa shukulaatada ay si fudud uga siideyso caaryada. Ha barafoobin ama waxaad sababi kartaa in wasaqda uumiga ay ka muuqato shukulaatada.
Dhig digsi keega dusha baaquli biyo kulul
Dhalaali cidhifyada meeris walba xoogaa ka dibna ku riix gacmo gashi.
Ka masax wixii shukulaato xad dhaaf ah una oggolow inaad si buuxda u dejiso.
Hadda waad rinjiyeyn kartaa qaybahaaga ama waxaad u isticmaali kartaa sida ay tahay.
2. Shukulaatada Shukulaatada
Shiraaqyada shukulaatada ayaa sameeya muuqaal aad u qurux badan oo ku saabsan dusha sare ee keegaaga! Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa warqad waraaq ah iyo waraaqo yar yar oo gogosha ah ama noocyo kaladuwan oo nooc ah.
Ku faafi lakabka khafiifka ah ee shukulaatada la qaboojiyey (86ºF) ama nacnaca ayaa ku dhalaalaya warqad xaashi ah.
Isku soo wada ururi geesaha dhinac dhinac ah warqadda xarafka ah iyo guntin si aad u xajiso
Dhig warqadda qaboojiyaha qaboojiyaha 10 daqiiqo illaa inta laga dejinayo
Si taxaddar leh uga saar xaashiyaha baakada gadaashiisa dambe ee shukulaatada
Nadiifi cidhifyada shukulaatada haddii ay mindi ku adag yihiin
Hadda shiraacaagu wuxuu diyaar u yahay inuu dusha ka saaro keegaaga!
Waxaan ku darsaday qaar ka mid ah buufiyeyaasha macdanta fudud dhoobtayda anigoo isticmaalaya TMP copper iyo xoogaa Everclear ah.
3. Koobabka Shukulaatada
Waxaan markii ugu horreysay bartay sidaan ugu sameeyo koobabkaan shukulaatada iskuulka lagu dubo oo aan jeclaa sida ay wax noqdeen! Waxay yihiin hab madadaalo ah oo loogu adeego xoogaa mousse shukulaato ah, jalaato ama macmacaan yaryar. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa biibito biyo ah, warqad xaraf ah iyo shukulaato qabow ama nacnac dhalaalay. Uma baahnid inaad isticmaasho buufinnada caadiga ah, way aad u weyn yihiin oo shukulaatada si fiican ugama sii dayso shukulaatada.
Afuufa buufinnada biyahaaga oo xir dhamaadka si aad u sugto.
Dul dhig xaashi xaashi ah xaashi buskud ah si aad koobabkaaga ugu dhigto.
Shukulaatadaada cadhaysan ku shub baaquli weyn. Heerkulku waa inuu ahaadaa 86ºF
Ku buufin buufinkaaga shukulaatada ka dibna ku dul xaashi warqada soo dejisan.
Mar alla markii aad wada buuxiso buufinnadaada oo dhan, dhig digsiga qaboojiyaha muddo 10 daqiiqo ah ama illaa shukulaatada ay dajiso.
Ku buuxi buufinnada biinanka oo buufinku si dabiici ah uga jiido shukulaatada.
Ka fuji buufinka oo hada koobabkaagu waxay diyaar u yihiin inay buuxiyaan dawooyin macaan!
4. Qurxinta Malabka Shukulaatada
Waan jeclahay sida kuwan qurxinta shukulaatada malabku ugu muuqdaan dusha buskudka! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa xoogaa duub buunbuunin ah (oo la dhaqay) iyo xoogaa shukulaato ah ama nacnac dhalaalay.
Ku faaf qaar ka mid ah shukulaatada la qaboojiyey (86ºF) ama nacnaca dhalaalay dhalaalaya guntadaada xumbo.
Shukulaatada sifiican u bixi. Khafiifinta aad faafisay, godadka badan ayaa muuqan doona.
Rux duubka xumbada si aad shukulaatada u degto oo u siman tahay.
Guntinta xumbada geli qaboojiyaha 10 daqiiqo illaa inta laga dejinayo.
Shukulaatadaada hoos u rog oo si tartiib ah uga soo saar duubka xumbada.
Hadda waxaad u kala jebin kartaa malabkaaga gabal ahaan oo aad qurxin kartaa macmacaankaaga!
5. Qurxinta shukulaatada qurxinta
Qurxinta shukulaatada shukulaatada ayaa ah mid aad u qurux badan oo ka muuqata dusha macmacaankaaga! Xitaa waad ku midabeyn kartaa gudaha gudaha shukulaato midab badan leh ka dib marka dulucda la dejiyo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa tayda shaashad shukulaatada bilaash ah , xoogaa acetate ah ama warqad xaashi ah, boorso tuubbo, iyo buug qaro weyn.
keega strawberry oo leh keeg cunto malag
Ku rid qaar ka mid ah shukulaatadaada kulul (86ºF) boorsada dhalada. Ka jar caarada bacda. Aad uma weyna, qiyaas ahaan ballaca cadayga.
Daabac shaambada balanbaalis-kaaga oo dul dhig warqadaada soo-baxda ama balastarkaaga dusha sare. Aniga ayaa hoos ugu duubay warqad buskud ah kana ilaali inay ruxdo oo ay sahlanaato soo qaadashadooda.
Raad raac shaxanka baalasha (maahan jirka) shukulaatadaada.
Shukulaatada ku rid qaboojiyaha 10 daqiiqo si ay u dejiso.
Marka baalashaada la dhigo, si taxaddar leh uga saar baalasha acetate. Kala-sooc acetate-ka kalabar oo dhig dhexda buugga qaro weyn (fiiri muuqaalka muuqaalka demo).
Dhig baalasha labada dhinac ee kala-baxa iyo tubbo shukulaato badan inta u dhexeysa baalasha si ay jidhka u noqoto.
Qabow mar labaad ilaa shukulaatada la dejinayo.
Balanbaalisadaada ayaa hada diyaar u ah in lagu dhigo keega ama keega!
6. Bowl Macmacaanka Shukulaatada
Qurxintan baaquli ee shukulaatada dareeraha ah ayaa udub dhexaad u ah miiska macmacaanka. Gudaha ku buuxi kareem la kariyey, miro ama jalaato iyo keeg! La wadaag macmacaanka dhamaadka, adiguna waad cuni kartaa baaquli sidoo kale!
Buufin buufin cabbir ah oo caadi ah oo ku rid baaquli ama koob foorara oo kor u jeeda si aad u joogto u ahaato.
Dhig xoogaa baakad ah dusha buufinka.
Dhig shukulaatadaada kulul (86ºF) ama nacnaca dhalaalay bacda tuubada iyo tuubada dusha sare ee caaga balaastigga ah.
Waa caadi in loo ogolaado in qaar ka mid ah shukulaatada ay ka daadato dhinacyada.
Buufin ku rid qaboojiyaha si aad u dhigto 10 daqiiqo.
Si taxaddar leh uga saar buufinka iyo baakadda shukulaatada.
Qurxinta shukulaatadaadu hadda waxay diyaar u tahay in lagu buuxiyo dawooyin macaan!
Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay barashada sida loo sameeyo qurxinta shukulaatadan! Sida had iyo jeer waad i weydiin kartaa su'aalaha faallooyinka haddii aysan wax caddeyn. Haddii aad isku dayday casharradan, ii sheeg!
Si fudud u xanaaq shukulaatada ku jirta microwave-ka! Habka ugu fudud ee lagu xanaaqayo qaddar yar oo shukulaato ah. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:5 daqiiqado Kalori:144kcal
▢12 oz (340 g) shukulaato waa inuu ku jiraa subagga kookaha
Tilmaamaha shukulaatada oo xumeynaya
Shukulaatadaada ku rid baaquli balaastig ah ama silikoon ah microwave-ka oo kuleylka kor u kici 30 ilbidhiqsi. Kadib walaaq
Kuleylka markale 30 ilbiriqsi oo kale, walaaq, ka dibna 15 ilbiriqsi, walaaq, ka dib 10 ilbidhiqsi, walaaq. Hubso in heerkulkaagu uusan waligiis dhaafin 90ºF shukulaatada madow. 86F shukulaatada caanaha ah iyo 84F shukulaatada cad. HA KU degdegin
Haddii shukulaatadaada aysan si buuxda u dhalaalin markaa kaliya samee 5 ilbidhiqsi oo kale illaa ay dhalaasho
Kalori:144kcal(7%)|Kaarboohaydraytyada:17g(6%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:10g(shan iyo toban%)|Dufan Dufan:6g(30%)|Sodium:5mg|Kaliumperyamper:82mg(laba%)|Fiber:labag(8%)|Sonkor:shan iyo tobang(17%)|Kaalshiyam:7mg(1%)|Bir:0.8mg(4%)
digaag cunto malag darwiish cream qabow
sida loo sameeyo keega sanduuqa isku qasan
sida loo barafoobo keega bilowga ah
sida loo barafeeyo keega laba jibbaaran